“Mipay Talenta Vao”: hitiliana ireo mpanolotra fandaharana vaovao | NewsMada
“Mipay Talenta Vao”: hitiliana ireo mpanolotra fandaharana vaovao
Ho fampivoarana hatrany ny tontolon’ny haino aman-jery. Nahita hevitra hampanao fifaninanana ho an’ireo izay liana amin’ny sehatry ny fanolorana fandaharana sy vaovao amin’ny haino aman-jery ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Serasera. “Mipay talenta Vao”, fifaninanana nasionaly, izay natao hitiliana ireo endrika sy feo vaovao handimby sy hanampy ireo efa eo amin’ny sehatra izy ity.
Nahatratratra 378 ireo liana ka nisoratra anarana manerana ny Nosy. Niisa 146 ny avy amin’ireo faritra 16 raha toa ka 232 kosa ny avy eto Analamanga. Tapaka fa ny 50 tamin’ireo avy any amin’ny faritra sy ny 80 nisoratra anarana teto Analamanga no niatrika ny dingana voalohany. Tsy tonga kosa ny valo, ka 72 ihany izy ireo no niofana sy nanao ny fitsapana voalohany.
Tontosa omaly ny dingana voalohany, niisa 40 indray ireo notsongaina hiatrika ny dingana faharoa, amin’io herinandro ho avy io. Fiofanana lalindalina kokoa, mahakasika ny tontolon’ny fanentanana amin’ny haino aman-jery hatrany no hatao mandritra izany. Hisy ny fitsapana amin’ny faran’ny dingana, ho fantatra eo indray izay ho tafakatra.
Nizara ho sokajy efatra ireo mpifaninana, ahitana ireo liana amin’ny fandaharana amin’ny fahitalavitra, ny fanolorana vaovao amin’ny fahitalavitra, ny fandaharana amin’ny onjampeo ary ny fanolorana ny vaovao amin’ny onjampeo. Efa fanta-daza eo amin’ny sehatry ny haino aman-jery ireo mpampiofana toa an-dry Alphonse Andriamahaly, Vero Rabakoliarifetra, Hervé Rakotozanany ary Tharcicus Raherinandrasana.